လှချင်သူများအတွက် Mini Home Workout | Thaing Wizard
Posted on October 15, 2013 by Aung Thu Htet	ခုတစ်လော မအားတာကြောင့် အသစ်တွေ မတင်နိုင်ခဲ့တာ သည်းခံကြပါဦးဗျာ။ လုပ်လက်စတွေတော့ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် အကုန်လုံးက ဟိုတစ်ပိုင်း၊ ဒီတစ်ပိုင်းတွေ လတ်စမသတ်ရသေးတာတွေ ဖြစ်နေတယ်။ လမကုန်ခင်တော့ အသစ်တင်ဖြစ်အောင် တင်ဖို့ အားခဲထားပါတယ်။ ဒီနေ့မနက် Thaing Wizard ကိုဝင်ကြည့်တော့ ကာယဗလစာအုပ်တွေ တင်ပေးထားတဲ့ နေရာမှာ မေးထားတဲ့ မေးခွန်းလေးတစ်ခု ကိုတွေ့ပြီး စိတ်ကူးပေါက်တာနဲ့ ဒါလေးကို တင်ပေးလိုက်တယ်။ သိုင်းအကြောင်းမဟုတ်ဘူး ဆိုပြီးတော့ ရွှေစိတ်တော် မကွက်ကြပါနဲ့နော်။ သိုင်းအကြောင်းတွေလည်း တင်နိုင်အောင် လုပ်နေပါတယ်။
This entry was posted in Bodybuilding, Bodybuilding Article and tagged ကာယဗလ by Aung Thu Htet. Bookmark the permalink.	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...